Zimbabwe: Nikuv Intl. Projects, company managing voter lists & election results, accused of rigging vote to re-elect Mugabe, incumbent President with record of human rights abuses - Business & Human Rights Resource Centre
Zimbabwe: Nikuv Intl. Projects, …
Denial of freedom of expression/ assembly Intimidation & threats Political opinion discrimination Lawsuits & regulatory action: General
Zimbabwe: Nikuv Intl. Projects, company managing voter lists & election results, accused of rigging vote to re-elect Mugabe, incumbent President with record of human rights abuses
Nikuv International Projects did not respond to: Nikuv Intl. Projects, company managing voter lists & election results, accused of rigging vote to re-elect Mugabe.
Israeli company at centre of Zimbabwe election-rigging allegations
Israeli Nikuv firm shuts Zimbabwe office after Robert Mugabe 'landslide'
Election rigging scandal deepens [Zimbabwe]